Iholide yakho yendalo kufutshane nesixeko saseVerona - I-Airbnb
Iholide yakho yendalo kufutshane nesixeko saseVerona
Ifama sinombuki zindwendwe onguFrancesco
ICaranatura ikunikeza indawo yokuhlala ezolileyo entliziyweni yeenduli zeVerona, imizuzu nje eli-15 ukusuka kumbindi wesixeko. Zibhaptizwe ekuthuleni kweenduli kwaye ujabulele ixesha loxolo olupheleleyo, imihlaba epholileyo, ukuhamba okude emahlathini, kwiidiliya kunye nemithi yomnquma.
Le fama inemigangatho emibini inekhitshi eliqaqambileyo nelamkelekileyo kumgangatho ophantsi, lijikelezwe ziindonga zeglasi ezikuvumela ukuba wonwabele umbono omangalisayo phezu kwendawo entle enenduli.
Ungafumana igumbi lokuhlala kumgangatho ophantsi ngokunjalo. Ibonisa ibhedi ekhululekileyo yesofa enokuthi isetyenziswe ukuba iyafuneka, kunye nendawo yomlilo entle eya kuzisa ulonwabo ekuhlaleni kwakho. Igumbi lokuhlambela elineshawari ligqibezela umgangatho ophantsi.
Umgangatho ophezulu unegumbi lokulala elikhulu elinamagumbi amabini anepanoramic terrace.
Ngaphandle, ibarbecue yezitena iyafumaneka ukuze kuphekwe.
Ngaphezu koko, ukuba kuyimfuneko, unokongeza ibhedi eyongezelelweyo. Indlu iCaranatura ilungele ukuhlala abantu abahlanu.
Kukwakho nenkonzo ye-wifi yasimahla kunye neyokupaka.
(kwiinyanga zikaJuni, Julayi, Agasti noSeptemba ubuncinci bokuhlala bubusuku obu-6)
4.96 · Izimvo eziyi-125